Spzụ ahịa Spree II oghere na-eweta nnukwu Self Love - pisklak.net
Spzụ ahịa Spree II oghere na-eweta nnukwu Self Love
Ndị mmadụ si t Actual Time Gambling nyere ohere pụrụ iche ịzụ ahịa Spree II maka ndị ahịa ọ bụla. N’ime ezi paradaịs a, mmetụta uche na-agbanwen’ọchịchọ, akpa ụlọ ahịa gị ga-ejupụta d e nnukwu self cha cha.
Spzụ ahịa Spree II ogheren’ozuzu
Ihe ịzụ ahịa niile dị ebe a ma kpuchie ya. Ihe mgbaaka Diamond, akara buck, akpa aka, ugogbe anya maka anwụ, ugba olu, kaadị akwụmụgwọ, ekwentị mkpanaaka bụ ụfọdụ akara, mana dịka na ndụn’ezie”SALE” bụ otun’ime ihe kachasị mma. Ọ bụ anụ ọhịa na oghere ntanetị a miniature gosipụta na agbaji na agba 3 d e ndị nnọchi maka akara ndị ọzọ niile belụsọ gbasasịa nke ahụ bụ njirimara egwuregwu ahụ.
Nke a bụ oghere t shirt na-agan’ihu nke meriri mgbe akara mgbaaka mgbaaka 5 na-eme na payline na-edochi x20″SALE”. “Spzụ Spzụ!” Complimentary egwuregwu Njirimara nwere ike award gị 9 complimentary egwuregwu. A ga-atụnye akara akara ọ bụla pụtara n’oge atụmatụ a na Tally Bonus gị. O doro anya na ị ga-enweta ma self love ma na njedebe nke”ppingzụ ahịa!” Egwuregwu efu, na egwuregwu egwuregwu self love ọzọ maka ihe 1000 ọ bụla na Tally. Agbanyeghị, ọ bụrụ n ‘iru ihe 1000, ị nweta ihe ngụgụ obi.
Nke a pụrụ iche bonus gburugburu ga-triggered mgbe 3 ma ọ bụ karịa gbasasịa”ppingzụ ahịa Spree II” akara na-egosin’ebe ọ bụla. Onu ogugu bu 9 egwuregwu efu. N’oge atụmatụ that a aha ya bụ”ppingzụ ahịa!” 100, 200, 300, 400 na 500 akara ngosi nwere ike ịpụta na laps 1 ruo 5n’otun’otu. A ga-agbakwunye akara ngosi ọ bụla na Bonus Tally. Ego na-amalite t 0. Akara achụsasịghị egosi n’oge atụmatụ egwuregwu n’efu.
Zụ ahịa Spree II oghere bụ ihe niile maka inyefe ka ndị egwuregwu nwere ike inye onyinye self maka egwuregwu egwuregwu egwuregwu ga – akwụsị mgbe egwuregwu egwuregwu anaghị akwụ ụgwọ. Onu ogugu di iche na onu ahia gi ga – ekpebi ego ego ị ga – enweta. Nwere ike nweta atọ ruo a maximum nke 12 mmezi egwuregwu. Ọzọkwa, ohere ị nwere mmerin’oge self indulgent a na-agba ego na-abawanye ka etiti etiti dum ga-anọn’ọhịan’oge ntụgharị ego.
Nke ahụ abụghị ihe niile! Ọ bụrụ na inwere ihe na-erughị akara 1000 na Bonus Tally, a ga-enye gị onyinye ọbụla. Nwere ike imeri n’etiti ugboro atọ na 100 ugboro nzọ gị dị ka ihe ngụgụ nkasi obi dabere na isi ihe ole anakọtara n’okpuru 1000.
Ka anyị gaa zụọ ahịa miniature nakọta nnukwu cha cha cha cha cha cha cha cha!